Chuma ngoHlelo Lokuphathwa Kwezentengiso | Martech Zone
Chuma ngoHlelo Lokuphathwa Kwezentengiso
ISonto, May 29, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukuqalisa indawo encane yokudayisa kungumsebenzi onzima, odinga ukuthi umnikazi webhizinisi abe yingxenye yezimakethe futhi abe yingxenye yomthengisi ngaphezu kokuqhuba ibhizinisi lakhe. Ngisanda kuthola incwadi evela ku-Elliot Yeo evela ku- Khulisa, isicelo se-software esakhelwe ukusiza abathengisi abancane ngokuqhuba nokwenza ngcono ibhizinisi labo.
Lapho uhlelo selunemininingwane ngokuthengisa nokuthengisa kwakho, lunikeza izincomo ezihlakaniphile:
Futhi, uhlelo lunohlelo oluningiliziwe lokuphathwa kwezikhangiso ukukunikeza impendulo ngemizamo yakho yokumaketha.
Amandla weTrive ukuthi ahlinzeka ngemininingwane emangalisayo ngomsebenzi ngaphakathi kwebhizinisi lakho. Ngingathanda ukubona ukuthi uhlelo nalo luqapha ukusesha kwendawo imiphumela, ukuqapha komphakathi kanye nezindlela zokuhlanganisa ukumaketha kweselula ne-imeyili ngaphakathi kwebhizinisi. Umsebenzi omningi wabathengisi abancane wenziwa ngamathuba okuphinda amabhizinisi kanye nama-upsell - ukubeka i-imeyili noma umlayezo wombhalo kubaphathi bakho kungashayela amadola ngokushesha kulayini wakho ophansi!
Nayi ividiyo emfushane echaza ukuchuma:
Lapho ngibuyekeza isiza, ngiyaqiniseka ukuthi iqembu ligcwele izandla pOS ukuhlanganiswa - ngakho-ke mhlawumbe ukuqapha okungekho esizeni kuzokwehla ngomgwaqo!
Sebenzisa Iselula Ukuthola Ababhalisile be-imeyili
Izixhumanisi Zokuphakela okuzenzakalelayo zeWordPress